October 2014 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Khant Phyo Win at 8:08:00 PM 0
Khant Phyo Win at 12:09:00 AM 0
Skin Pack ဆော့ဖ်ဝဲများ
Windows ကို Android L, Chrome, Ubuntu, Yosemite စတိုင်ပြောင်းပေးမယ့် Skin Pack
Unknown at 7:57:00 PM 0
Windows PC သမားတွေ အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ Themes နဲ့ Desktop Style ဟာ ရိုးအီလာတယ်ဆိုရင် အခြား OS ရဲ့ Style လေးနဲ့ ပြောင်းပြီးသုံးနိုင်ဖို့ Skin Pack တစ်ခုကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. Windows Style ကနေ Android L, Chrome, Ubuntu, Yosemite Style ကို လွယ်လွယ်ကူကူပြောင်းပြီး Android L, Chrome, Ubuntu, Yosemite တစ်ခုခု သုံးနေသလို ခပ်တည်တည်နဲ့ သုံးနေလိုက်ပေါ့ဗျာ... Windows အားလုံးမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့အတွက် ကိုယ်ဘယ် Windows Edition ကိုပဲသုံးသုံး ပြောင်းလို့ရပါတယ်...
Theme skin pack that I share is Android L, Chrome, Ubuntu, and Yosemite so there are4skin pack that I share on this occasion. Skin Pack supports Windows7operating system, 8, 8.1. That was some skin pack that included my friend can select and install.
Skin Pack itself is one alternative to beautify the look of the windows that we use to make it look more pleasing to the eye.
Skin Pack : 99 Mb
CCleaner 4.19.4867 Professional, Business, Technician Edition Full
Unknown at 5:39:00 PM 0
PC သမားတွေ Windows ကိုသုံးကြတဲ့အခါ System မှာ မလိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေများလာလေ့ရှိပါတယ်.. Windows Registry ထဲမှာလည်း အသုံးမလိုတာတွေ ထပ်ကာထပ်ကာ ထည့်သွင်းခံရပါတယ်.. ဒါကြောင့် ကွန်ပျူတာမှာ မလိုအပ်တဲ့ အမှိုက်တွေများလာပြီး လေးလံလာတတ်ပါတယ်.. အင်တာနက်သုံးတဲ့ Browser တွေမှာလည်း Cache, Cookie, Temp Files တွေနဲ့ History တွေကျန်နေတဲ့အတွက် အင်တာနက်မြန်နှုန်းကို ရသင့်သလောက် မခံစားရတော့ပါဘူး.. ဒါတွေကိုရှင်းဖို့ Windows PC သမားတွေကတော့ Utility တွေကိုသုံးကြရပါတယ်.. အဲဒီထဲက အသုံးအများဆုံးကတော့ CCleaner ပေါ့ဗျာ.. အခု တင်ပေးလိုက်တာတော့ ဒီလနောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်း 4.19.4867 ဖြစ်ပြီး Professional, Business, Technician ဆိုပြီး Edition သုံးမျိုး ဖြစ်ပါတယ်.. Setup ဖိုင်ကတော့ တစ်ဖိုင်ပဲပါလာမှာဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ Crack ဖိုင်တွေထဲက Bat ဖိုင်တွေကို Runပြီး Enter ခေါက်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ.. Crack နေစဉ် အင်တာနက်ခဏတော့ ပိတ်ထားပေါ့ဗျာ...
Piriform’s CCleaner isaquick and easy to use program which makes your computer faster, more secure and more reliable. CCleaner removes cookies, temporary files and various other unused data that clogs up your operating system. This frees up valuable hard disk space allowing your system to run faster. Removing this data also protects your anonymity meaning you can browse online more securely. The built in Registry Cleaner fixes errors and broken settings to make your computer more stable. The simple, intuitive UI and rapid but powerful cleaning make CCleanerafavourite among novices and techies alike. Professional, Network, Business and Technician Editions of CCleaner are also available for serious users.
Home Page : https://www.piriform.com/CCLEANER
CCleaner 4.19.4867 : 3.54 Mb
Pyae Phyo (MMiTD) at 5:18:00 PM 0
ကထိန်ကို မြတ်စွာဘုရားသခင်က ကောသလမင်းကြီးနှင့်အဖေတူအမေကွဲ ညီအစ်ကိုများဖြစ်ကြသော ဘဒ္ဒဝဂ္ဂီမင်းမျိုးမင်းနွယ်ဝင်ရဟန်းအပါး(၃၀)တို့ အပေါ် ကရုဏာတော်ထား၍ပထမဆုံးခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုရဟန်းတော်များသည် ဓုတင်ဆောင် သောအရိယသူတော်စင်များဖြစ်ကြသော်လည်း ရဟန္တာများမဟုတ်ကြသေးပါ။ ထိုရဟန်းများသည် အနာထပိဏ် သူဋ္ဌေးကြီး၏ ဇေတဝန်ကျောင်းတော်၌ သီတင်းသုံးနေတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားကို ဖူးမြော်ပူဇော်ကြရန်အတွက် ၎င်းတို့ သီတင်းသုံးရာဇာတိနေရပ်ဖြစ်သော ပါဝါမြို့တော်မှ သာဝတ္ထိမြို့ သို့ခရီးထွက်လာခဲ့ကြသည်။
credit to - အရိပ်စစ်
mmitdeveloper at 2:13:00 PM 0
မင်္ဂလာပါ။ဒီgameလေးကတော့တော်တော်လန်းတဲ့Third person shooter gameလေးပါ။ပုံဘဲကြည့်လိုက်ပါဦး။3Dဒီဇိုင်းဆိုတော့ရုပ်ထွက်ကတော့မိုက်တယ်ဗျာ။ကဲအောက်မှာDetailတွေကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာ။
Google က USB Stick ကို အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းအကောင့်များကို ၀င်ရောက်နိုင်သည့် လုံခြုံရေးနည်းပညာကို ပြုလုပ်ပေး
Pyae Phyo (MMiTD) at 7:01:00 AM 0
Google က အသုံးပြုသူများအတွက် သူတို့၏ အွန်လိုင်းအကောင့်များကို လုံခြုံစေသော နည်းပညာဖြစ်သည့် 2-Step Verification ကို ပြုလုပ်ပေးထားပါသည်။ ယခုအခါ ပိုမိုလုံခြုံသော နည်းလမ်းဖြစ်သည့် USB Stick ဖြင့် အကောင့်များကို ၀င်ရောက်နိုင်သည့် နည်းပညာကို ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါသည်။
USB Stick ကို အသုံးပြု၍ Google Website များကို ၀င်ရောက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ အကောင့်များကို ၀င်ရောက်ရန် USB Stick ကို ကွန်ပြူတာတွင် ချိတ်ဆက်ရမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ နည်းပညာတွင် အားသာချက်နှစ်ခုရှိသည်ဟု Google ကပြောပါသည်။ ပထမ အချက်မှာ USB Security Key သည် Google Website ကဲ့သို့ ပုံဖမ်းထားသော အတုအယောင် ၀က်ဆိုက်များကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ ဒုတိယ အချက်မှာ ခိုးယူ၍ မရသည့် Cryptographic Signature နည်းပညာကို အသုံးပြုထားပါသည်။
FIDO U2F ကို အထောက်အပံ့ပေးသော USB Stick များတွင် Google ၏ Security Key ကို အသုံးပြုနိုင် မည် ဖြစ်သည်။ Security Key ကို လက်ရှိတွင် Google Chrome Browser တွင် အထောက်အပံ့ပေး ထားပါသည်။ အခြား ဘရောက်စာများသည်လည်း Security Key ကို မကြာမီ အထောက်အပံ့ပေး လာမည်ဟု မျှော်လင့်ရပါသည်။
Anonymous at 1:07:00 AM 0
ဒီလိုပါ ကျနော်တို့service သမားများအနေဖြင့် ဖုန်းပစ္စည်းများမှာယူလိုတဲ့အခါ ဈေးနှုန်းလေးတွေမေးမြန်းခြင်တဲ့အခါမှာ ယုဇနပလာဇာမှ ဆိုင်များကို contact လုပ်၍မေးမြန်းကြရပါတယ်။ အဲဒီလိုမေးမြန်းတဲ့အခါ ယုဇနပလာဇာကဖုန်းပေါ့နော် 01200747 ကိုဖုန်းခေါ်လိုက်တာနဲ့ ယုဇနပလာဇာမှ ကြိုဆိုပါတယ် မိတ်ဆွေခေါ်ဆိုလိုသောလိုင်းခွဲနံပါတ်သို့တိုက်ရိုက်နိုပ်၍ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်လို့ ပြောတဲ့အခါ ကျနော်တို့က လိုင်းခွဲနံပါတ် ဥပမာ 2456 ကိုခေါ်ဆိုရပါတယ်။ အခုပြောပြမဲ့နည်းကတော့ အဲဒီလို ခေါ်တဲ့အခါ 2456 ဆိုတဲ့လိုင်းခွဲနံပါတ်ကိုနိုပ်စရာမလိုတော့ပဲ ကလစ်တစ်ချက်တည်းနဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်အောင် contact list ထဲ ရိုက်ထည့်ထားပြီးခေါ်ဆိုနိုင်အောင်ပြုလုပ်နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကဲစရအောင် Contact ကိုဖွင့်ပြီး new contact ယူလိုက်ပါ။ Mobile number နေရာမှာ ကိုယ်ခေါ်ဆိုမယ့်ဖုန်းနံပါတ် 01200747 ကိုရိုက်ပြီး 01200747 နောက်မှာ ; လေးခံပြီး လိုင်းခွဲနံပါတ် 2456 ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါ။ ဥပမာ 01200747;2456 ဒါဆိုရပါပြီ ။ ပြီးရင် 01200747 ကိုဖုန်းခေါ်ကြည့်ပါ။ Send the following tone?ဆိုပြီး ဘောက်တစ်ခုပွင့်လာပါမယ်။ ခေါ်ဆိုမယ်ဆိုရင် yes ကိုနိုပ်လိုက်ရင် ရပါပြီ။ ရှင်းသွားအောင်ကျနော် ပုံလေးနှစ်ပုံပြပေးပါမယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
Windows ဆိုင်ရာ နည်းပညာသတင်း
ပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှု ၇,၀၀၀ ခန့် ပါဝင်သည့် Windows 10 Technical Preview update ကို Microsoft ဖြန့်ချိ
Pyae Phyo (MMiTD) at 1:00:00 AM 0
လွန်ခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်က ဖြန့်ချိခဲ့သည့် Windows 10 Technical Preview အတွက် update ကို Microsoft မှ ဖြန့်ချိပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါ Build 9860 update တွင် feature သစ်များ ပါဝင်လာသလို အားနည်းချက် အချို့ကိုလည်း ပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်း သိရသည်။
Windows 10 Techinal Preview update တွင် ပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှု ၇,၀၀၀ ခန့် ပြုလုပ်ထားကြောင်း Microsoft မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းတွင် ပါဝင်လာသည့် Action Cetner သစ်သည် message များ၊ status update များ၊ email များနှင့် calendar event များကို တစ်နေရာတည်းတွင် ဖော်ပြပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် desktop များအကြား ပြောင်းလဲအသုံးပြုရာတွင် animation သစ်ကို အသုံးပြုထားပြီး monitor အများအပြားအကြား app များကို ပြောင်းလဲ အသုံးပြုရာတွင် keyboard shortcut သစ် (Windows key + Shift + arrow key) ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင် Windows 10 Technical Preview ကို အသုံးပြုနေသူများသည် Windows Update မှတစ်ဆင့် အဆိုပါ update ကို အလိုအလျောက် download ပြုလုပ်ကာ install ပြုလုပ်ပေးမည် ဖြစ်သည်။ Windows Update မှ အလိုအလျောက် install ပြုလုပ်ချိန်ကို မစောင့်လိုသောသူများ အနေဖြင့် PC settings ရှိ Windows Update တွင် “Update and recovery” ကို နှိပ်ကာ Preview build ကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။
Pyae Phyo (MMiTD) at 5:50:00 PM 0
Khant Phyo Win at 11:11:00 AM 0
Unknown at 7:44:00 AM 2
မိတ်ဆွေတို့ သိကြတဲ့ အတိုင်းပါပဲ facebook
လုပ်တယ်ဆိုတာ လွယ်သူတွေ အတွက် လွယ်ခဲ့
သလို ခက်သူတွေအတွက် ခက်ခဲပါတယ်
ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်က အကောင့်ပေါင်းများစွာ
ကို လုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီး lock ကျတာလည်း မနည်းခဲ့ပါဘူး facebook ကို လေ့လာချင်လို့ပါ
ယနေ့မနက်မှ သိရတာပါ သိသိခြင်း တင်ပေး
လိုက်တာပါ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်နားလည်စေလို
အရင်ဆုံး browser အကြောင်းပြောပြရစေ
၁။ install လုပ်ထားသော browser
၂။ ဖုန်းမှာ ပါသော browser
မိမိသုံးချင်သော browser တစ်ခုခုကို
phone setting/apps/all /
မိမိရွေးသော browser ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
clear data နှိပ်ပါ ရပါပြီးပြန်ထွက်လိုက်ပါတော့
facebook apk ကို ဖွင့်ပြီး
အကုန်ပြီးလို့ female or male ရောက်ပြ
VPN တစ်ချက်ကြည့်ပါ female or male
တခါတခါမှာ facebook ထဲ ရောက်သွားသလို
တခါတခါမှာ browser ပေါ်လာပါတယ်
facebook ထဲရောက်ရင်တော့ စာအုပ်အတိုင်းလုပ်
browser ရောက်ရင်တော့ သတိထားရပါမယ်
ဘာကြောင့်ဆိုတော့ မလုပ်တတ်ရင် lock ကျတတ်ပါတယ်
browser ထဲရောက်လို့ code တောင်းရင်ဆိုပါဆိုsend code ကို မနှိပ်လိုက်ပါနဲ့ home ခလုတ်ဖြင့် ပြန်ထွက်ပြီး email ဖွင့်လိုက်ပါ
မိမိလုပ်ထားသော အကောင့်ကို ထည့်ပြီးသွားရင်
ခဏစောင့် လည်တာပြီးတာထိ ပြီးရင်တော့ အပေါ်
က ဖြစ်သော facebook နှစ်ခုဖြစ်နေပါလိမ်မယ်
ဒါဆို အပေါ်ကဟာကို ဖွင့်လိုက်ပါ
ဒါမျိုးကို တွေ့ရပါမယ် တွေ့တဲဟာကို နှိပ်လိုက်ပါ
browser ပေါ်လာပြီး မိမိ clear data လုပ်ထားသော browser ရွေးလိုက်ပါ
clear လုပ်မထားရင်တော့ lock ကျပါလိမ့်မယ်
clear data လုပ်ထားသော browser နှိပ်ပြီးရင်
သူခိုင်းမှာက friend add ခိုင်းပါမယ် အကုန်ပြီးလို့
မိမိက facebook ကို browser နဲ့ မသုံးချင်ဘူး
facebook apk လေးနဲ့ပဲ သုံးချင်ရင်တော့
facebook apk ဖွင့်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါပြီး
facebook တွင်တစ်ကောင့်log in
လုပ်လိုက်ပြီးနောက်တစ်ကောင့်ထည့်ချင်ရင်တော့ log out မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ ခင်ဗျာ
facebook ကိုနှိပ်လိုက်ပါ clear data
နှိပ်လိုက်ပါ ဒါဆို အပြင်ပြန်ထွက်လိုက်ပါ facebook
log in ပြန်လုပ်နိုင်ပါပြီး နောက်တစ်ကောင့်လည်း
ပုံ / password / name ပြောင်းချင်ရင်
CoolPad Fonts Mobile Fonts
Unknown at 10:16:00 PM 0
ဒီ Coolpad ကို MM Aio Font Changer နဲ့ Roboto Method သုံးရင်
Firmware ကျပါတတ်လို့ ကိုဖြိုးချမ်းက ဒီ Tool ကို ရေးပေးလိုက်တာပါ။
မိမိ Computer မှာ တော့ Java ရှိရင်ရပါပြီ။
ဖုန်းမှာတော့ Root Access ရှိရပါမယ်။
Credit : Phyo Chan ( MMSD )
Coolpad 5217 Myanmar Font Installer : 1.18 Mb
Khant Phyo Win at 12:35:00 PM 0
Unknown at 8:52:00 PM 1
၂၀၁၄ ဇူလိုင် ၂၅ ရက် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာမှာ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးက ဆင်းကဒ်များ၊ လိုသလောက် ရောင်းမည် ဆိုတဲ့သတင်း ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီ သတင်းထဲမှာ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီကနေ ၂၀၁၄ ဇွန်လအထိ CDMA – 800MHz ဆင်းကဒ်၂၉၉၀၀၀၊ GSM ၁၇၄၉၇၀၀ ၊ WCDMA ၇၁၀၃၀၀ ရောင်းချခဲ့ပြီးကြောင်း ရေးထားပါတယ်။ ဆင်းကဒ် စုစုပေါင်း ၂.၇၅၉သန်း ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။
ဒါက၂၀၁၃-၂၀၁၄ တနှစ်တာ ကာလဖြစ်ပြီး မြန့်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးက ရောင်းချထားတဲ့ မိုလ်ဘိုင်းဖုန်း ဆင်းကဒ် စုစုပေါင်းက ၉.၂၅ သန်းရှိပါတယ်။
အဲဒီမှာ ကျနော် အတွေးတခု ဝင်လာပြီး ဆင်းကဒ်တခုကို ဖုန်းတလုံးနှုန်းနဲ့ ဝယ်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဖုန်းတလုံးက တသိန်း ကနေ ငါးသိန်းနှုန်းနဲ့ အကြမ်းဖျင်းတွက်ပြီး ဖုန်းတလုံး နှစ်သိန်းနှုန်း ပျမ်းမျှထားကြည့်ပါတယ်။ ၉.၂၅ သန်းကို ၂ သိန်း နှုန်းနဲ့ မြှောက်ရင် ၁၈.၅ သန်းဖိုးလောက် ဖုန်းအတွက် သုံးလိုက်ကြတယ်လို့ တွက်မိပါ တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ လူဦးရေနဲ့ အကြမ်းဖျင်း အချိုးချကြည့်ရင် လူဦးရေ သန်း ၆၀ မှာ ဖုန်းသုံးစွဲသူ ၉.၂၅သန်း ဆိုတာ နည်းသေးတယ် လို့ ပြောတဲ့သူတွေ ပြောကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီငွေတွေဟာ နိုင်ငံခြားကို ထွက်သွားတာ ဖြစ်ပြီး၊ ကိုယ့်နိုင်ငံက ဘယ်လို ပစ္စည်းမျိုးတွေ ရောင်းချလိုက်ရသလဲ၊ ဘယ်လောက် အဖိုးတန်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပါသွားသလဲ တွေးမိနေတာပါ။
ဖုန်းမပေးခင်တုံးကလည်း တမျိုး၊ ဖုန်းပေးပြန်တော့လည်း တမျိုးလို့တော့ မပြောပါနဲ့ဗျာ၊ ကျနော့် စိတ်ထဲ တွေးမိနေတာ ရေးပြတာပါ။
အဲဒီမှာ ထပ်ပြီး တွေးနေမိတာက ကျနော်တို့ဆီက မိဘတွေ ထပ်ပြီး ခေါင်းကိုက်စရာ တခု တိုးလာပြီပေါ့။ သူများတွေ ဖုန်းဆိုတော့ သားတွေသမီးတွေ ပူဆာရင်၊ သူများနဲ့ တူတူတန်တန်လေး ဖြစ်အောင် ဆိုပြီး ရှိစုမဲ့စုနဲ့ဖုန်း ဝယ်ပေးကြ ရမယ်။ ဝန်ထမ်းတွေ ကြားထဲမှာ၊ အလုပ်သမားတွေ ကြားထဲမှာလည်း ဖုန်းလေးတလုံးတော့ ရှိမှ ဖြစ်မယ်ဆိုပြီး ဝယ်ကြ သုံးကြဖြစ်နေ ကြပါတယ်။
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးနဲ့ နည်းပညာတွေဟာ အချိန်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲနေပြီး တားဆီးလို့ မရနိုင် ကောင်းတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်နေ ပါတယ်။ လူတိုင်းကတော့ iPhone6 ထွက်ရင် iPhone6 လေး ကိုင်ချင်ကြတာပါ။ ဒါလည်း မသုံးရ၊ မဝယ်ရလို့ တားဆီးလို့ မရနိုင်ပါ။ တားမရတဲ့ အတူတူ အကျိုးရှိရှိ သုံးစေချင်ပါတယ်။
တယ်လီဖုန်းတွေ၊ အထူးသဖြင့် စမတ်ဖုန်းတွေဟာ ကွန်ပျူတာ အသေးစားလေးတွေ ဖြစ်နေပါပြီ။
စမတ်ဖုန်းတွေ ဆိုရင် အင်တာနက်သုံးတာ၊ သီချင်း ဗီဒီယို ဖွင့်ကြည့်တာ၊ ဓာတ်ပုံရိုက်တာ၊ ဗီဒီယိုရိုက်တာ၊ ဆိုရှယ်ကွန်ရက်သုံးတာ အကုန် သုံးနိုင်နေပါပြီ။ တယ်လီဖုန်းဆိုတာ ဖုန်းပြောရုံ သီးသန့်သုံးတဲ့ ပစ္စည်း မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဖုန်းသုံးတဲ့သူတွေ တော်တော်များများ မေးကြည့်မိပါတယ်။ အင်တာနက်သုံးတယ်၊ ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးတယ်၊ message တွေပို့တယ်၊ သီချင်း နားထောင်တယ်၊ ဗီဒီယိုအပိုင်းလေးတွေ ကြည့်တယ်၊ ဒီလောက်ပါပဲ။ ဒါတောင် အင်တာနက်မသုံးတဲ့သူတွေ မသုံးကြပါဘူး။
စမတ်ဖုန်း မသုံးချင်လို့ ဝယ်မသုံးတဲ့သူတွေ၊ မတတ်နိုင်လို့ မဝယ်နိုင်တဲ့သူတွေကို မပြောလိုပေမယ့် စမတ်ဖုန်း သုံးထားပြီး ဖြစ်ရင်တော့ အင်တာနက်ချိတ် သုံးသင့်ပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘုတ်၊ မက်ဆေ့ခ်ျ၊ အီးမေးလ်၊ ချတ်တင် ကျွမ်းကျင်အောင်သုံး သင့်ပါတယ်။ တချိန်လုံး ချတ်တင်လုပ်နေ၊ အင်တာနက် သုံးနေတာမျိုး၊ အလွန်အကျွံ မဖြစ်အောင်တော့ ဂရုစိုက်ရပါမယ်။ အတတ်ကောင်းတွေ သင်ပေးနေပြန်ပြီလို့ မယူဆပါနဲ့။
နိုင်ငံခြားမှာ ဝန်ထမ်းတွေ ဟိုဘက်ထိုင်ခုံကနေ ဒီဘက်ထိုင်ခုံ အီးမေးလ်သုံးပြီး အလုပ်ကိစ္စ အကြောင်း ပို့ပါတယ်။ ခွင့်တိုင်တာ၊ နောက်ကျတာ၊ ချိန်းဆိုတာ မျိုးတွေ အီးမေးလ်တွေ၊ message တွေသုံးပို့ကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ ရှိနေအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်နေ့၊ ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နှစ်နာရီ၊ ဘယ်နှစ်မိနစ်က ဘာ အကြောင်းအရာ အီးမေးလ်ပို့ထားတယ် ဆိုတာ မှတ်တမ်း မှတ်ထားပြီး ဖြစ်နေပါပြီ။ ဘာမှ ငြင်းချက်ထုတ်စရာ၊ အငြင်းပွားစရာ မရှိတော့ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံက စင်ကာပူများကွန်ရက် အင်ဂျင်နီယာတွေ အနေနဲ့ အလုပ်လုပ်ကြတဲ့သူတွေ အများကြီးပါ။ သူတို့ ပထမဦးဆုံး ရင်ဆိုင်ရတာ ကွန်ရက်ပြဿနာထက်ကို ကိုယ်သွားရောက် ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်ပေးရမယ့် ရုံးတွေ လိပ်စာတွေကို ဖုန်း၊ အီးမေးလ် ကနေတဆင့် သူဌေးက ပို့လိုက်ပါတယ်။
မနက်ကျရင် ကိုယ့်လမ်းကြောင်း ကိုယ်ဆွဲ၊ ကိုယ့် အစီအစဉ်နဲ့ ကိုယ်လုပ်၊ Google map ရှာရ၊ ကိုယ်ပြင် ဆင်ရမယ် ရုံးက ကွန်ပျူတာကိုင်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ text message တွေ၊ အီးမေးလ်တွေ အပြန်အလှန် ပို့ရနဲ့ ကွန်ရက်ပြဿနာ တွေ ဖြေရှင်းဖို့ထက် အဲဒီပြဿနာတွေက အရင်ဆုံး ရင်ဆိုင်တွေ့ရမှာဖြစ်လို့ ကွန်ပျူတာ တင်သာမက ဖုန်းတွေကိုပါ ကျွမ်းကျင်ပြီး ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်။ အရေးအကြောင်းကျမှ တောင်တလုံး မြောက်တလုံး မဖြစ်အောင် ကြိုတင်လေ့ကျင့် ထားရပါမယ်။
လိုအပ်တဲ့ ဆောဖ့်ဝဲ (App) တွေ တင်ထားပါ
Andriod အတွက် App တွေ၊ iOS အတွက် App တွေ သန်းနဲ့ချီ ရှိနေပါတယ်။ မြန်မာစာနဲ့ ပတ်သက်ရင် စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံကျမ်း၊ စွယ်စုံကျမ်း အီးဘွတ်တွေ၊ သစ်တွက်တာ၊ အင်ဂျင်နီယာတွေ အတွက် တွက်ချက်တာ၊ အဘိဓာန်တွေ၊ စွယ်စုံကျမ်းတွေ၊ သိပ္ပံနည်းပညာဆိုင်ရာ ဂဏန်းတွက်စက်တွေ စတဲ့ App တွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။ အဆင်ပြေ တာကို ရှာပြီး လိုအပ်သလို သုံးနိုင်ပါတယ်။
အင်တာနက်က ဒီလောက်နှေးနေတာ ဆိုရင်တော့ ရေတဝက်ပဲ ရှိတဲ့ ဖန်ခွက်ကို ရေတဝက်ပဲ ရှိတာလား၊ ပိုမြင်တာနဲ့ ရေတဝက်တောင် ရှိနေပါလား ဆိုတဲ့ အမြင်ကို ပြန်ပြောရပါမယ်။ အင်တာနက်သုံးရတာ အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒါအမှန် ပါ။ ဒါပေမယ့် နေ့ဘက်သုံးရတာ အဆင် မပြေရင် ညဘက်သုံးလို့ ရပါတယ်။ ဖုန်းနဲ့ အဆင်မပြေရင် အင်တာနက်ဆိုင် ခဏသွားထိုင် သုံးလို့ရပါတယ်။
စတီရီယိုသံတောင်မှ မထွက်တဲ့ မိုနိုကက်ဆက်ကို အကောင်းလုပ် သုံးခဲ့ရပါတယ်။ သယ်လို့ရတဲ့ ဝေါ့မင်း ကက်ဆက် တိတ်ခွေ ဖွင့်စက်ကို မြင်ပဲမြင်ဖူးပါတယ်။ တီဗီကြည့်ချင်ရင် သူများအိမ်မှာ သွားကြည့်ခဲ့ရပါတယ်။ အဆင်ပြေ – မပြေ တွေ ပြောမနေဘဲ၊ အင်တာနက်မသုံးဘဲ offline သုံးနိုင်တဲ့ App တွေ ရွေးသုံးနိုင်ပါတယ်။
စမတ်ဖုန်း တလုံးရှိရင် သင်ထွက်ချင်တာတွေ အားလုံး တွက်ချက်နိုင်တဲ့ App တွေ ရှိနေပါတယ်။ ပရိုဂရမ်မာတွေ အတွက် ၁၆ လီစိတ် ၊ ၈ လီစိတ်၊ ၂ လီစိတ် (Hex ၊ Oct ၊ Bin) ဒဿမကိန်း၊ ကဲကုလ (Calculus) ၊ ဓါတုဗေဒမှာ သုံးတဲ့ Periodic Table စတာတွေ အားလုံးသုံးနိုင်တဲ့ App တွေရှိနေပါတယ်။ သီးခြား Scientific Calculator ၀ယ်သုံးစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
ကွန်ရက်သမားတွေ၊ ကွန်ပျူတာ ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းတဲ့ သူတွေဟာ ကွန်ပျူတာ အင်တာနက်သုံးပြီး၊ အဝေးက လှမ်း ပြုပြင် ထိမ်းသိမ်းတာမျိုး လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ အခု Android Smart phone တွေနဲ့ Tablet တွေသုံးပြီး၊ အဝေးက လှမ်းထိမ်းလို့ ရတဲ့ App တွေပါ။ အရင်သုံးနေကျ Team-Viewer ကလည်း Android အတွက် ရေးထားပြီး၊ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်က Microsoft Remote Desktop ဆိုပြီး၊ App တွေ ရေးပေးထားပေးပါတယ်။ ဒါကတော့ ကွန်ပျူတာ သမားတွေ အတွက်ဖြစ်လို့ သုံးနေပြီး၊ သိနေပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီ App က ဒေါင်းလုတ် လုပ်တဲ့ အကြိမ်ရေ ၁၀ သန်း ကျော် ရှိနေတဲ့ ရေပန်းအစားဆုံး App တခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဆမ်ဆောင်းက တရားဝင် ရေးသားဖြန်ချိ ထားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆမ်ဆောင်း တီဗွီစီးရီးတွေ ဖြစ်တဲ့ B ၊ C ၊ D ၊ E နဲ့ F စီးရီး တီဗွီတွေမှာ သုံးနိုင်ပါတယ်။ သိပ် မကြာခင်သေးခင်က ထုတ် ထားတဲ့ H စီးရီးကိုတော့ လက်ရှိ အချိန်မှာ သုံးလို့ မရသေးပါဘူး။ အခု Smart TV Remote က ဆမ်ဆောင်း ရဲ့ တီဗွီတွေမှာပဲ သုံးလို့ရတာ ဖြစ်ပေမယ့် တခြား App တွေက တခြား တီဗွီတွေမှာ သုံးလို့ရနိုင်တာတွေ ရှိနေပါတယ်။
လက်သမား၊ ပန်းရံ၊ မြို့ပြ အင်ဂျင်နီယာတွေ အတွက် ပစ္စည်းကုန်ကျတဲ့ အရေ အတွက် သစ်၊ သံ၊ ဘိလပ်မြေ၊ အုတ်၊ ဆီဆေး၊ ရေဆေး စတာတွေ တွက်ချက်ဖို့၊ ဧရိယာမျက်နှာပြင် ဘယ်လောက်လဲ၊ ထုထည် ဘယ်လောက်လဲ၊ အခုံးတွေ၊ အခွက်တွေ၊ အရိုးတွေ၊ အသားတွေ အလွယ်တကူ တွက်ချက်ဖို့ App တွေ ရှိနေပါတယ်။ အင်တာနက်ထဲမှာ တိုက်ရိုက် ရှာ ကြည့်ပြီး၊ တွက်ချက်ပေးနိုင်တဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေလည်း ရှိနေပေမယ့် အခု App လေးတွေ install လုပ်ထားခဲ့ရင် တော့ အင်တာနက် ချိတ်စရာ မလိုဘဲ သုံးနိုင်ပါတယ်။
သူတို့တွက်ချက်တာတွေဟာ မြန်မာက စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ မကိုက် ညီတာမျိုး ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပေမယ့်၊ အနီးစပ်ဆုံး တွက်ချက်ပေးနိုင်ပြီး၊ သွားရင်းလာရင်း ဖုန်းထဲမှာတင် ကောက်တွက် လို့ ရတာ အဆင်ပြေလို့ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း၊ အိမ်ပြင်ဆင်တဲ့ လုပ်ငန်းလုပ်သူတွေ မဖြစ်မနေ သုံးသင့်တဲ့ App တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ Blood Presure Diary App လို့သုံးပြီး သွေးပေါင်ချိန် တိုင်းလို့ရတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဖုန်းရဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲထဲမှာ bluetooth သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းစက်ကို တွဲသုံးပြီး၊ သွေးပေါင်ချိန် မှတ်တမ်း မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ သင့် မှတ်တမ်းကို နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ နှစ်စဉ် စသဖြင့် အချက်အလက်တွေကို စစ်ဆေး၊ စီစစ် ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ တခြား ကျန်းမာရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ App တွေလည်း အများကြီး ရှိနေပါတယ်။
ဝိတ်လျော့ဖို့၊ အားကစား လေ့ကျင့်ဖို့၊ မာရသွန် လေ့ကျင့်ဖို့၊ ကြံ့ခိုင်ရေး လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ဖို့ App တွေ စမ်းသုံးဖို့ မလွယ်လောက်အောင် များနေပါတယ်။ အရပ်၊ ကိုယ်အလေးချိန်၊ ခန္ဓာကိုယ် အရွယ်အစားကို တွက်ချက်ပေးတဲ့ BMI, BMR စတဲ့ ပရိုဂရမ်တွေ၊ ကယ်လိုရီ တွက်ချက်ပေးတဲ့ ပရိုဂရမ်တွေ App တွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာမှ ကမ္ဘာကျော် အားကစား ပစ္စည်းရောင်းချတဲ့ Nike, Adidas စတာတွေက ရေးထားတဲ့ App တွေ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ မန်ယူနည်းပြကြီး တောင်မှ တက်ဘလက်လေး တကိုင်ကိုင်နဲ့ ဘာ App တွေသုံးပြီး ဘာတွေမှတ်နေလဲတော့ မသိပါ။
ကွန်ပျူတာနဲ့ ဆက်စပ်သုံးချင်တဲ့ သူတွေအတွက် မိုက်ခရိုဆောဖ့်ရဲ့ အော့ဖစ် (Word, Excel,Power point ) စတဲ့ ဖိုင်တွေနဲ့ ဆက်စပ်သုံးနိုင်တဲ့ ပရိုဂရမ်တွေ၊ App တွေ ရှိပါတယ်။ ပီစီတွေ သုံးပြီး စာစီစာရိုက်တာ၊ စာရင်းဇယား တွက်ချက်တာ မျိုးလောက်တော့ မလွယ်ပေမယ့် အရေးပေါ် ဖွင့်ကြည့်တာ၊ ခရီးသွားလာရင်း၊ အင်တာနက်က ဖိုင်တွေကို ဖတ်ဖို့ သုံးနိုင်ပါတယ်။ အလားတူပဲ Photo-shop လိုဖိုင်တွေ သုံးဖို့လည်း App တွေ ရှိနေပါတယ်။
စမတ်ဖုန်းတွေမှာ ပါပြီးသား လုပ်ဆောင်ချက်တွေကလည်း တကိုယ်ရည်သုံးဖို့ အတွက် လုပ်ဆောက်ချက်တွေ အတွက် နိုးစက်နာရီ၊ မှတ်စုတို၊ စာရင်းတွက်ဖို့၊ အသံဖမ်းဖို့၊ စတာတွေ အပြင် သတိပေးဖို့ စာရွက်လေးတွေပေါ် ရေးပြီး မမေ့အောင် ကပ်သုံးရတဲ့ PostIt ကလည်း ဒစ်ဂျစ်တယ် ဗားရှင်းအနေနဲ့ ရေးသားပေးပါတယ်။ ၃း၀၀ နာရီမှာ အစည်းအဝေး၊ ၇း၀၀ မှာ ညစာစားပွဲ စသဖြင့် မှတ်ပြီး သိမ်းနိုင်သလို သက်ဆိုင်တဲ့ မှတ်စုတွေကိုပါ အုပ်စုလိုက် တွဲထား နိုင်ပါတယ်။
အခု ရေးထားတာတွေက ကျနော် စိတ်ဝင်စားတာလေးတွေ သုံးနေတာလေးတွေထဲက နမူနာပဲ ရှိပါသေးတယ်။ Apple Phone တွေ အတွက်ဆိုရင် သီးခြား App တွေ ရှိနေပြီး၊ အခုရေးထားတာက Andriod Phone တွေ အတွက် ဖြစ်ပါ တယ်။ ဝက်ဘ်လိပ်စာတွေ မှတ်သားစရာမလိုပဲ Google App Store ထဲမှာ ရှာရင်ကို အများကြီး ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီထဲ ကမှ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ကြယ်ပွင့်လေးတွေ ကြည့်ပြီး ရွေးနိုင်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ အသုံးတည့်မယ့် APP ဟုတ် မဟုတ်ကတော့ အချိန်ပေးပြီး စမ်းသပ်သုံးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ စမတ်ဖုန်းနဲ့ အင်တာနက်သာရှိရင် သင်လုပ်ချင်တာ လုပ်လို့ ရပြီပြောရင် မလွန်ပါဘူး။
သင့်ဆီမှာ စမတ်ဖုန်းတလုံး ရှိနေပြီ ဆိုပါစို့၊ အဲဒီဖုန်းကို သင်ဘယ်လောက်အထိ အသုံးချသလဲ ဆိုတာ ဆင်ခြင် ကြည့်သင့် ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ စမတ်ဖုန်းကို ကြူဖို့ ကြောင်ဖို့ပဲ သုံးဦးမှာလား၊ အကျိုးရှိရှိ သုံးမှာလား သင့်ဘာသာသင် ဆုံးဖြတ်ပါတော့။ ။
Unknown at 7:04:00 PM 0
(၁) GSM ဆိုတာကတော့ Global System for Mobile Communication ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) CDMA ဆိုတာကတော့ Code Division Multiple Access ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) MP3 ဆိုတာကတော့ MPEG player ၃ ဖြစ်ပါတယ်။
(၄) MP4 ဆိုတာကတော့ MPEG-4 video file ဖြစ်ပါတယ်။
(၅) PDF ဆိုတာကတော့ Portable Document Format ဖြစ်ပါတယ်။
(၆) CD ဆိုတာကတော့ Compact Disk ဖြစ်ပါတယ်။
(၇) DVD ဆိုတာကတော့ Digital Versatile Disk ဖြစ်ပါတယ်။
(၈) HTML ဆိုတာကတော့ Hyper Text Markup Language ဖြစ်ပါတယ်။
(၉) WML ဆိုတာကတော့ Wireless Markup Language ဖြစ်ပါတယ်။
(10) GPRS ဆိုတာကတော့ General packet Radio Service
(11) LAN ဆိုတာကတော့ Local Area Network
(12) WLAN ဆိုတာကတော့ Wireless Local Area Network
(13) SIM ဆိုတာကတော့ Subscriber Identity Module
(14) USB ဆိုတာကတော့ Universal Serial Bus
ဖော်ပြပါ ရှင်းလင်းချက်များသည် အဓိက အသုံးများသော အရာများ ကိုပင်
ဖော်ပြ ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခြားသော အရာများ ကျန်ရှိပါ
Khant Phyo Win at 10:44:00 PM 0
Khant Phyo Win at 4:04:00 PM 0
Khant Phyo Win at 3:07:00 PM 0
One go two come theory
Min Oaker at 2:53:00 PM 0
Khant Phyo Win at 1:21:00 PM 0
Windows 8 Metro Apps (Facebook, Viber) တွေမှာ Zawgyi မြန်မာစာကို အမှန်မြင်ရပါပြီ
Anonymous at 8:27:00 AM 0
both x64 and x86
Anonymous at 11:49:00 PM 0
ပိုကောင်းပါတယ် ဒီနည်းက မူလ စက်ရုံ ထုတ် Region ကို ပါ သိနိုင် ပါတယ် ။
သို့ သော် အချို့ ဖုန်းများ ကို Support မပေးပါ ။ need internet
1. Samsung Kies အရင်သွင်းပါ ။မရှိရင် Download Here http://www.samsung.com/us/kies/ .
2.battery ဖြုတ်ပြီး ဖုန်းမှာကပ်ထားတဲ့ စာရွက်က S/N no or Serial Number မှတ်ထားပါ ။
3. ဖုန်းနဲ့ကွန်ပြူတာ ချိတ်ပါ
4. Samsung Kies ဖွင့်ပါ။ ပြီးလျှင် Tools ထဲ မှ Firmware Upgrade and Initialization ၀င်ပါ.
5. ဖုန်းမော်ဒယ် ကို စာလုံးအကြီး နဲ့ အကုန်ရေးပါ ။ဥပမာ - GT-I9100 ,
6. ပြီးလျှင် S/N or serial number ရိုက်ပါ ။စာလုံး အကြီးအသေးမှန် ရပါမယ် ။
7.box တခုပေါ် လာရင် Region code သိ ရပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
အကယ် လို့ လိုင်းကောင်းလို့ တင်ချင်တယ် ဆို next တွေ ဆက်လုပ်ပေးပါ ။သူ့ ဘာသူ ဒေါင်းပြီး တခါတည်း Firmware တင်သွားပါမယ် ။
Region Code ဖတ်ရန်
VTL = VIETNAM Post from MMSD Forum အဆင်ပြေပါစေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်